Mayelana NATHI - I-Baoding Xueruisha Feather And Down Products Co, Ltd.
Xueruisha Feather Futhi Down Products Co., Ltd.
Sitholakala kolunye lwezimpaphe ezinkulu nezindawo ezisezingeni eliphansi zezimboni eChina - iBaiyang Lake, iBaoding, i-Hebei eNyakatho neChina. I-Xueruisha Feather And Down Products Co., Ltd.inokuhlangenwe nakho okuhle ekukhiqizeni izimpaphe nemikhiqizo ephansi, kufaka phakathi ama-quilts phansi, imicamelo phansi, izimpaphe nomatilasi abaphansi, izikhwama zokulala phansi, izingubo eziphansi nezinye. Inkampani yethu inamasethi womugqa womkhiqizo ku-eiderdown nasekukhishweni okungamathani ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili ngonyaka. Imikhiqizo yethu ingafinyelela umthethonqubo waseChina wokuthekelisa. Ngenxa yomklamo wethu oyingqayizivele nekhwalithi ephezulu, imikhiqizo yethu ithengiswe kahle eMelika, eYurophu, eJapan naseKorea. Umthamo wethu wokukhiqiza ufinyelela izingcezu ezingaphezu kwezigidi eziyisithupha ngonyaka. Imikhiqizo yethu inconywa kakhulu emakethe yasendaweni futhi iwine imiklomelo yoMkhiqizo Wesiqalo Sokuqala WesiFundazwe, Umkhiqizo Kazwelonke Wokukala Kokuqala, Umkhiqizo Wokwethembeka ngamakhasimende noMkhiqizo odumile weSifundazwe saseHebei ngekhwalithi. Sithole isitifiketi se-ISO9001 ngo-2009. "Ubuqotho, ukuzinikela kanye nokwenza izinto ezintsha" kube ngumoya wethu eminyakeni eyi-11 eyedlule. "Ikhwalithi enhle, ukuphathwa kahle kanye nokwenzelwa amaklayenti" umqondo wethu wensizakalo.
Ngo-1973, umsunguli wethu nomongameli, uJianhong Liu wazalelwa emndenini womdobi eDazhangzhuang Village, e-Anxin County, esifundazweni sase-Hebei. U-Liu waya efemini ese-Anxin County wayosebenza njengomsebenzi wokuhlwaya uboya. Ukukhishwa izinwele kwakuwumsebenzi onzima futhi okhandlayo. U-Liu akazange adambe noma adlale ngokushelelayo. Uvuke ekuseni wabingelela umnyama wasebenza kanzima. Ngokushesha uzuze ukwazisa nokwethenjwa komphathi wefektri. , Wanyuselwa kuma-accountant esikhathini esingaphansi kwengxenye yonyaka.
Ngo-1992, ngeYuan engu-20 000 ayilondoloze emsebenzini wesikhashana kanye nephupho lokuqala ibhizinisi, wabambisana nabangane bakhe ukuya eningizimu eGuigang City, eGuangxi, futhi waqala ukuhweba ngamafilimu nokuthengisa okuluhlaza. Ngemuva kweminyaka emithathu yokusebenza kanzima, ngo-1995, uLiu oneminyaka engama-22 wayenezigidi zemali, futhi waba ngumnikazi omncane kunabo bonke eDazhangzhuang Village evela emndenini ompofu. Wathembela ekusebenzeni kanzima nasekuzimiseleni ukumba "imbiza yokuqala yegolide".
Ngo-1999, uLiu wabhalisa iJinlida Down Products Factory, wabhalisa umkhiqizo, futhi wangena ngokusemthethweni emkhakheni wokukhiqiza umkhiqizo. Wangena ezimakethe izinyanga ezimbalwa, ehlaziya ngokucophelela imakethe, futhi wahlela nezinhlelo zokukhiqiza umkhiqizo nezinhlelo zokumaketha. Ngokuya ngefilosofi yebhizinisi, besilokhu sigcizelela ukuthi "uzuze amakhasimende ngobuqotho futhi uthuthukise izimakethe ngokuhlakanipha". Njengoba inkampani ithuthuka, uhlala ecabanga ngayo: Ukuze ibe nkulu, inkampani kufanele ibheke emakethe nasemhlabeni.
Ingcezu yophaphe oluncane ayinakho okuqukethwe kobuchwepheshe obuphansi. U-Liu uholele inkampani ukuthi iphikelele ekukhiqizeni ngokuqinile ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba. Lapho nje imikhiqizo ephansi iphuma, yamukelwa ngabathengi futhi yawina i- "National Excellent Product", "Hebei Famous Brand", "Hebei Famous Brand", ne- "Consumer", "Labo abangawethemba umkhiqizo", " inkontileka neyunithi ethembekile "neminye imiklomelo.
Ngo-2003, u-Liu washintsha ngokusemthethweni igama le-Jinlida Down Products Factory wayenza i-Anxin County Liteshu Down Products Co., Ltd., futhi wakhulisa izinhlobo zemikhiqizo ngaphansi komkhiqizo we- "Liteshu", kusukela ku-duvet yokuqala eyodwa kuya ezikhwameni zokulala phansi, njengamajakhethi aphansi kanye nezihlalo eziphansi. Ngo-2005, i- "Liteshu" yonke yadlulisa isitifiketi se-ISO9001: 2000 somhlaba jikelele sokulawulwa kwekhwalithi. U- "Liteshu" uzuze ukwethenjwa ngekhwalithi, wathola inombolo enkulu yama-oda, waqala ukungena emakethe yamazwe omhlaba. Ukuthengiswa komkhiqizo wenkampani kwafinyelela izingcezu ezingaphezu kwezingu-100,000 ngalowo nyaka, futhi inani lokukhipha lidlula ama-Yuan ayizigidi ezingama-50.
Ngo-2006, inkampani "iLiteshu" neFrance Saint Laurent • I-Xueruisha (International) Garment Co., Ltd. yajoyina amabutho ukubhalisa nokusungula i-Baoding Xueruisha Down Products Co, Ltd., futhi yasungula uchungechunge lwemikhiqizo "brand Xueruisha".
NgoMeyi 27, 2014, iXueruisha Down Products Co, Ltd. yabalwa ngempumelelo njengenkampani yokuqala eBaoding ukuhlala ebhodini elikhulu leShijiazhuang City. Eminyakeni engama-20 edlule, iXueruisha Down Products Co., Ltd. ithenge, yacubungula futhi yathengisa cishe amathani angu-50 000 ezimpaphe; ikhiqize futhi ithengise imikhiqizo ephansi eyizigidi eziyi-2.2 Konke lokhu kwenza uLiu agcwale ukuzethemba ekuthuthukisweni kwenkampani esikhathini esizayo.
Ngo-Ephreli 1, 2017, kwafika izindaba zokusungulwa kwesifunda esisha saseXiong'an. Njengosomabhizinisi ongumlimi owayesebenza kanzima kusuka phansi, uLiu Jianhong wayejabule ngempela ngamathuba entuthuko edolobheni lakhe, futhi ngasikhathi sinye, wayecabanga ngokujulile ngokuthi anganikela kanjani ekwakhiweni kwesifunda esisha.
Njengosihlalo we-Hebei Down Industry Chamber of Commerce, u-Liu uveze ukuthi uzokweseka ngokuphelele ukwakhiwa kwesifunda esisha futhi ahole ekulaleleni ukuthathwa kwezinqumo kwalesi sifunda esisha. Ngasikhathi sinye, ngokuya ngezidingo zesifunda esisha, kuhlanganiswe nezimpawu zesifunda esisha, sizokwenza yonke imizamo yokulungiselela uguquko nokwenza ngcono ibhizinisi.
Ngo-Okthoba 25, 2020, ngokwesimo somjikelezo omusha wokuthuthukiswa kwe-leapfrog eXiong'an New District, i-Anxin County Cross-border E-commerce Industry Association ihambisana nentuthuko yezikhathi nezidingo zesimo, ngaphansi kwe ubuholi obulungile behhovisi lezinguquko nezentuthuko esifundazweni, nabo bonke osomabhizinisi Ngokunakekelwa nokusekelwa kwethu, nangemizamo yokuhlanganyela yawo wonke amalungu, umhlangano wokuqala wabanjelwa ehholo elenza imisebenzi eminingi eXueruisha ngo-Okthoba 25. Lona umcimbi omuhle ukwenziwa ngcono nokuguqulwa kwezimboni zendabuko eXiongan New District.
U-Liu, umongameli we-Xueruisha Co., Ltd., wakhethwa njengosihlalo. Usihlalo uLiu uthe ukusungulwa kwale nhlangano kuyasiza kakhulu ekuthuthukiseni i-Anxin neXiong'an e-commerce e-commerce. Njengelungu lomkhakha, uzokwabelana ngezinsizakusebenza zakhe, isikhathi kanye nesipiliyoni ekuguqulweni kwenkampani ezinkampanini, kanye nokuhlomula ngokuhlanganyela nezinkampani ezingamalungu, futhi ngokuhlanganyela bakhe ipulatifomu yesevisi esezingeni eliphakeme.
Eminyakeni yamuva nje, inkampani inikele ngaphezu kwe-Yuan engaphezu kwezigidi ezimbili emphakathini futhi yanikela ngamajakhethi aphansi angaphezu kwe-10,000. Yanikezwa isihloko se- "Advanced Individual" nguHulumeni Wesifundazwe Sabantu base-Hebei Emnikelweni Wezemfundo kanye ne- "Charity Enterprise" yi-Anxin County Charity Federation.
Indaba yethu izoqhubeka…